Fix Windows Gadziridza Kanganiso 0xc1900401
vamwe Windows 11/10 vashandisi, vari kutarisana nedambudziko rekurodha yazvino update. Ndichiri kuyedza kudhawunirodha iyo update kuburikidza neSettings > Windows Kwidziridzo, ivo vanoona iyo yekuvandudza kodhi kodhi 0xc1900401. Kana iwe uri kutsvagawo zvikonzero, uye nzira dzekugadzirisa dambudziko Windows Gadziridza Kanganiso 0xc1900401, saka apa ndipo paunofanira kunge uri. Mune ino post, isu tichataura nezve ese makuru makuru emhosva kumashure meseji yekukanganisa uye maitiro ekuabvisa. Ngatitange.
Kodhi yezvikanganiso 0XC1900401, MOSETUP_E_UA_NO_PACKAGES_TO_DOWNLOAD
Chii chinokonzera iyo Windows Gadziridza Kanganiso 0xc1900401?
Panogona kuve nezvikonzero zvakawanda kumashure kweiyo Windows Gadziridza Kanganiso 0xc1900401. Asi pakati pezvose, makuru akanyorwa pazasi.
Iwe uchatarisana nezvataurwa Windows Gadziridza kodhi yezvikanganiso kana wakabatana neinternet isina kusimba kana isina kugadzikana.
Zvisina kufanira zvekunze zvishandiso zvakabatana kune yako system zvinogona zvakare kukonzeresa meseji yekukanganisa.
Kana wakaremara iyo Windows Gadziridza Masevhisi, iwe uchatarisana nemhosho meseji.
Yakashatiswa system mafaera anogona kuve mumwe mukuru akonzeresa kuseri kwenyaya.
kana Windows cache folda yakashatiswa nekuda kwechimwe chikonzero, iwe unowanzo kutarisana neiyo yakataurwa kukanganisa kodhi.
Yechitatu-bato antivirus chirongwa chakaiswa pane yako system chinogona zvakare kukonzeresa nyaya.
Iye zvino zvawava neruzivo rwekutanga nezve zvikonzero zvinokonzeresa Windows Gadziridza Kanganiso 0xc1900401, ngatitarisei mhinduro dzese dzekubvisa dambudziko.
Pazasi pane rondedzero yeese anoshanda workarounds iwe aunogona kuedza kubvisa Windows Gadziridza Kanganiso 0xc1900401.
Tarisa uone kubatana kweinternet
manya Windows Gadziridza Troubleshooter
Bvisa zvishandiso zvekunze zvisingakoshi
Bvumira Windows Kwidziridzo & Windows Gadziridza Medic Services
Delete SoftwareDistribution forodha
manya Windows Gadziridza muKachena Boot State
Dhawunirodha Update kubva kuMicrosoft Update Catalog
Ngatitarisei mhinduro dzese zvakadzama.
1] Tarisa uone kubatana kweinternet
Usati wapinda mune chero chinhu chehunyanzvi, yako internet yekubatanidza ndicho chinhu chekutanga chaunofanira kutarisa. Kana iwe wakabatana kune isina kusimba kana isina kugadzikana internet yekubatanidza, iwe unozosangana nematambudziko uchirodha ichangoburwa Windows inogadziridza mune akasiyana mameseji ekukanganisa. Saka, batanidza system yako kune yakagadzikana uye yakasimba internet yekubatanidza.
2] Famba Windows Gadziridza Troubleshooter
Chinhu chinotevera chaunogona kuedza ndechekumhanyisa iyo Windows Gadziridza chinetso. Ndiyo imwe yedzakanakisa nzira dzekubvisa chero nyaya diki ine chekuita nazvo Windows Update. Kumhanya Windows Gadziridza Troubleshooter, tevera matanho ari pasi apa.
Vhura iyo Settings menyu nekudzvanya Windows + Ini makiyi ekudimbudzira.
Dzvanya pane izvi maitiro sarudzo iripo pane yekuruboshwe.
Zvino, fambai kuenda Troubleshoot > Mamwe matambudziko.
Click on manya sarudzo iripo padivi pe Windows Update.
Inotanga Windows Gadziridza Troubleshoot maitiro.
Vhura iyo Settings hwindo pane yako Windows 10 PC.
Click on Kwidziridzo & Chengetedzo kuita.
Zvino, fambai kuenda Troubleshoot > Kuwedzera matambudziko.
Sarudza Windows Update kubva pane zvakasarudzwa.
sarudza Run the troubleshooter.
Kana iyo nzira yekugadzirisa yapera, tangazve system yako. Edza kudhawunirodha iyo yekuvandudza uye tarisa kana dambudziko rikaramba riripo.
3] Bvisa zvisingakoshi zvekunze zvishandiso
Sezvambotaurwa, zvisingakoshi zvekunze zvishandiso sePendrive kana hard drive zvakabatanidzwa kune system zvinogonawo kukonzera yakataurwa kukanganisa meseji. Saka, paunenge uchirodha iyo yekuvandudza, bvisa zvese zvisina basa zvishandiso kubva kuhurongwa. Tarisa kuti dambudziko ragadziriswa here kana kuti kwete. Kana zvisina kudaro, edza mhinduro inotevera.
Onai: Fix Windows Gadziridza Kanganiso Kodhi 0x80244018
4] Gonesa Windows Kwidziridzo & Windows Gadziridza Medic Services
Kana wakaremara iyo Windows Gadziridza Masevhisi nekukanganisa, iwe unogona kutarisana nemhosho meseji. Iwe unozofanirwa kubatidza iwe pachako Windows Update Services kugadzirisa dambudziko. Iwe unogona kuzviita nekutevera matanho ari pasi apa.
Vhura iyo Start Menu nekudzvanya iyo Windows key.
mhando Services munzvimbo yakapihwa uye tinya enter.
Tsvaga Windows Update uye uvhure.
Kana iyo Service status inoti Akamira, tora pa kutanga kuita.
Dzvanya pa OK uye buda pahwindo.
Zvino, iwe uchafanirwa kudzokorora maitiro e Windows Gadziridza Medic Services naizvo. Wana, worivhura. Tarisa mamiriro eSevhisi. Dzvanya pa kutanga kana Service status ichiti Yakamiswa.
Tangazve PC yako, uye tarisa kana dambudziko richienderera.
5] Delete SoftwareDistribution folda
Chinhu chinotevera chaungaita kudzima iyo SoftwareDistribution folda. Heano matanho chaiwo aunofanira kutevera.
Kutanga, boot system mune yakachengeteka mode.
Zvino, vhura Command Prompt mune maneja mode.
Nyora mirairo iri pazasi wodzvanya enter.
Zvino, vhura File Explorer uye tsvaga Kugoverwa kwesoftware. Ichawanikwa pasi C: Windows.
Vhura Command Prompt zvakare mune administrator mode.
Kana mirairo yaitwa, tangazve system yako. Tarisa kuti dambudziko ragadziriswa here kana kuti kwete.
Verenga: Nzira yekugadzirisa sei Windows Gadziridza Kanganiso Kodhi 0x80242008
6] Famba Windows Gadziridza muKachena Boot State
Ita Bhutsu Yakachena, uye ipapo manually update Windows uye ona kana izvozvo zvichishanda.
7] Dhawunirodha Kwidziridzo kubva kuMicrosoft Update Catalog
Kana pasina imwe yeakataurwa workaround yakakubatsira kugadzirisa dambudziko, chinhu chekupedzisira chaunogona kuedza kurodha nemaoko iyo update kubva. Microsoft Ongorora Catalogue. Ndiyo sevhisi kubva kuMicrosoft kwaunogona kuwana ichangoburwa software inogadziridza, madhiraivha, uye hotfixes.
Ndogadzirisa sei a Windows 10 kugadzirisa kukanganisa?
Zvichienderana nechikonzero, kune nzira dzakawanda dzekugadzirisa Windows 10 gadzirisa zvikanganiso. Kubva pakuita SFC scan, kumhanya Windows Gadziridza Troubleshooter, kuisa Windows Kwidziridzo muYakachena Boot State, kuKuchenesa iyo SoftwareDistribution folda, idzi nzira dzese dzinogona kubatsira kugadzirisa dambudziko.
Chii chinonzi wuauserv?
Windows Update Services kana wowserv inobatsira kuona, kudhawunirodha, uye kuisa ichangoburwa Windows uye zvigadziriso zvemaapplication. Kana wadzima sevhisi iyi nemukana chero upi zvawo, uchanetseka kushandisa iyo Windows gadziridza kana otomatiki yekuvandudza chimiro. Uyezve, iwo akaiswa maapplication haazokwanise kuwana iyo Windows Purogiramu inonzi Update Agent (WUA)
Nzira yekugadzirisa sei Windows gadziridza chikanganiso 0x8024a000 mune mashoma matanho